“Aleo isika hijanona ho mpinamana” : taratasin’ny ankizivavy kely anglisy – jEreo Ato
Rédacteur et Développeur Web Publié le 14 mars 2019 14 mars 2019 - 1 minute de lecture Catégories SociétéÉtiquettes Brexit, Vondrona Eropeana
Amin’izao fotoana izao dia misedra fotoan-tsarotra ny firenena anglisy mikasika ny fialàn’izy ireo ao amin’ny Vondrona eropeana na ilay antsoina hoe Brexit. Raha tsiahivina dia tokony ho amin’ny 29 marsa izao ny daty ofisialy hialàn’ny firenena britanika ao amin’ity Vondrona ity.
Mahakasika izany indrindra dia nanoratra taratasy ho an’i Donald Tusk ny ankizivavy anglisy iray, vao enin-taona monja. I Donald Tusk izay filohan’ny Filan-kevitra eropeana. Toy izao moa no tao anatin’izany taratasy izany :
“Ho an’i Ramose Tusk. Monina aty Grande-Bretagne aho. Fantatro fa hiala ao amin’ny Vondrona eropeana izahay, nefa mieritreritra aho hoe tokony hijanona ho mpinamana ihany isika. Raha mety re, afaka mba handefasanao sary nasiana sonia ve ny bokiko momba an’i Eropa ?”
Tamin’ny fomba feno hatsoram-po no nanoratan’i Sophie izany taratasy izany. Nampiany sarina “licorne”, voninkazo, fo ary kintana teo ambanin’ilay taratasy. Nambarany tamin’ny fanamarihana kely eny amin’ny sisin’ilay taratasy moa fa nataony ho an’i Donald Tusk ireo kisarisary nataony ireo.
Etsy ankilany, namaly izany ny filoha Donald Tusk tao amin’ny kaonty Instagram-ny tamin’ny 13 marsa teo. Hoy izy nampanantena: “ho mpinamana foana isika, ry Sophie”.
Samy miandry izay ho tohin’ity raharaha Brexit ity izany na ny ankizy any Grande-Bretagne, na ireo Solombavam-bahoaka any an-toerana na ireo sokajin’olona samihafa voakasik’izany.
Nangonin’i Daniel R.